Hurumende Yotarisira Goho Rakanaka Mwaka Uno
Kubvumbi 21, 2011
Hurumende yakati ine tarisiro yekukohwa matani anoda kusvika mamiriyoni maviri echikafu gore rino, kunyange hazvo nzvimbo zhinji dzenyika dzichinzi hadzina kuwana mvura yakakwana.
Gurukota rezvekurima, VaJoseph Made, vakaudza vatori venhau muHarare neChitatu kuti ongororo yakaitwa nehurumende inoratidza kuti nyika inganowana chibage chingasvika matani chiuru nechidimbu kubva pamamiriyoni maviri emahekita akarimwa.
VaMade vakatiwo munyika mune mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru zvematani echibage aripo kare mumatura eGrain marketing Board, kana kuti GMB. Vakatiwo panotarisirwa matani zana nemakumi mashanu ezviuru egoho rembeu diki dzakaita sezviyo nemapfunde.
Asi mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakaudza nyika nemusi weMuvhuro kumhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika kuti zuva rakarova mune mamwe matunhu munyika, ringangokonzeresa nzara munyika, izvo zvingangoita kuti nyika itenge chikafu kubva kunze.
Hurumende yakazivisawo kuti iri kunetseka kutakura chibage kubva kuGMB ichichiendesa kumatunhu akatarisana nenzara.
Nyanzvi munyaya dzekurima, VaThomas Nherera, vanoti vanowirirana neongororo yehurumende iyi.
Asi vanotiwo zvinogona kuitika kubva nhasi kusvika panopera nguva yekukohwa zvinogona kushandura mamiriro eongororo iyi.